Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi
Dza Ɔwɔ Mu Wɔahyehyɛ no Esiado Esiado
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 1
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 2
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 3
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 4
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 5
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 6
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 7
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 8
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 9
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 10
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 11
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 12
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 13
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 14
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 15
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 16
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 17
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 18
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 19
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 20
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 21
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 22
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 23
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 24
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 25
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 26
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 27
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 28
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 29
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 30
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 31
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 32
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 33
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 34
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 35
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 36
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 37
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 38
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 39
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 40
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 41
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 42
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 43
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 44
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 45
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 46
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 47
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 48
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 49
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 50
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 51
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 52
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 53
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 54
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 55
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 56
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 57
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 58
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 59
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 60
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 61
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 62
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 63
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 64
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 65
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 66
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 67
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 68
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 69
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 70
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 71
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 72
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 73
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 74
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 75
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 76
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 77
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 78
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 79
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 80
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 81
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 82
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 83
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 84
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 85
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 86
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 87
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 88
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 89
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 90
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 91
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 92
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 93
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 94
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 95
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 96
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 97
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 98
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 99
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 100
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 101
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 102
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 103
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 104
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 105
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 106
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 107
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 108
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 109
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 110
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 111
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 112
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 113
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 114
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 115
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 116
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 117
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 118
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 119
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 120
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 121
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 122
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 123
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 124
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 125
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 126
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 127
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 128
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 129
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 130
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 131
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 132
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 133
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 134
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 135
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 136
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 137
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi 138
Asɔr Dawurbɔ 1
Asɔr Dawurbɔ 2
Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi yi yɛ nyikyerɛ a ofir Nyame na nkenyan dawurbɔ a wɔdze maa dɛ wɔnhwɛ do mfa nkyekyer Nyankopɔn n’ahenman no wɔ asaase do wɔ nda a odzi ekyir yi mu. Ɔwɔ mu dɛ no mu afã no dodowara wɔkãa kyerɛɛ Jesus Christ N’Asɔr a ɔwɔ hɔ ma Nda a Odzi Ekyir Ahotseweefo no mu mba dze, naaso no mu nsɛm, kɔkɔbɔ na afotu nyina yɛ mfaso dze ma adasamba nyinara na nsɛm a ɔwɔ mu no yɛ nsa a wɔroto dze afrɛ nyimpa a wɔwɔ mbea nyina dɛ wontsie Ewuradze Jesus Christ ne ndze a ɔrekasa kyerɛ hɔn wɔ aber yi mu wɔ hɔn yieyɛ nye hɔn nkwagye a ɔwɔ hɔ daapem ho.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ ber a nna Asɔr no mu Elderfo reyɛ ehyiadzi soronko bi wɔ Hiram, Ohio, wɔ Ɔberɛfɛw 1, 1831. Nyikyerɛ pii nna nsa akã efi Ewuradze hɔ ana dɛm ber yi robɔsõ, na mbrɛ wobesi aboa iyinom ano na woetsintsim dze ayɛ nwoma dze epue guado no nye ndzɛmba etsitsir a wɔgyee too mu wɔ ehyiadzi no ase no mu kor. Dɛm fã yi nye Ewuradze ne nyienyim a ɔdze maa nkyerɛkyerɛ, ahyɛmudzi na mbrasɛm a ɔdze mae wɔ dɛm mberano yi mu.
Joseph Smith n’abakɔsɛm mu bi a ɔkãa faa ɔbɔfo Moroni ne nsɛm a ɔkãa kyerɛɛ Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ ber a Nkɔnhyɛnyi no wɔ n’egya ne fie wɔ Manchester, New York, Fankwa 21, 1823 ewimbir no. Moroni yɛ abakɔsɛm akyerɛwfo santsen no mu nyia odzi ekyir a wɔkyerɛɛw abakɔsɛm a ɔda wiadze enyim seseiara a ɔyɛ Mormon Nwoma no. (Fa to Malachi 4:5–6 ho; na afã 27:9; 110:13–16; na 128:18 ho.)
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ayɛwoho, 1828, ɔfa Mormon Nwoma ne fã a odzi kan, nkrataafa 116 ne nkyerɛase a wɔfrɛ no Lehi nwoma a ɔyewee no ho. Nkɔnhyɛnyi no twetwee noho ana ɔrema dɛm nkrataafa yinom efi ne nkyɛn akɔ Martin Harris a, ɔbɔsoom dɛ Mormon Nwoma ne nkyerɛase ɔkyerɛwfo no wɔ mber kakra bi mu no hɔ. Wɔnam Urim na Thummim no do yii nyikyerɛ no kyerɛe. (Hwɛ Ɔfã 10.)
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, do dze maa n’egya, Joseph Smith Panyin, wɔ Harmony, Pennsylvania, Kwakwar 1829.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, do dze mae wɔ Harmony, Pennsylvania, wɔ Ebɔw 1829 mu, wɔ Martin Harris n’ebisadze ho.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ebɔbira, 1829. Oliver Cowdery hyɛɛ no dwumadzi ase dɛ ɔkyerɛwfo wɔ Mormon Nwoma ne nkyerɛase no ase, Ebɔbira 7, 1829. Nna Nyame ada no edzi akyerɛ no dada ma oehu nokwar a ɔwɔ Nkɔnhyɛnyi ne dasegye a ɔfa mprɛtse no a woekrukye Mormon Nwoma n’abakɔsɛm wɔ do no ho. Nkɔnhyɛnyi no nam Urim na Thummim no do bisaa Ewuradze na onyaa dɛm mbuae yi.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ebɔbira 1829, ber a wɔnam Urim na Thummim no do dze bisaa dɛ ana John, osuanyi a wɔdɔɔ no no da ho tse ase anaa oewu no. Nyikyerɛ no yɛ abakɔsɛm a John kyerɛɛ ase wɔ abowa no nwoma do na nankasa dze kosumae.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ebɔbira 1829. Ber a nna wɔrekyerɛ Mormon Nwoma no ase no, Oliver a, nna ɔda ho yɛ ɔkyerɛwfo a, ɔkyerɛw dza Nkɔnhyɛnyi no bɛka no, pɛɛ dɛ wɔma no akyɛdze a wɔdze kyerɛ ndzɛmba ase. Ewuradze tsiee no sufrɛ ntsi na ɔdze dɛm nyikyerɛ yi maa no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ebɔbira 1829. Ɔkasa kyerɛ Oliver dɛ onnya abotar na ɔhyɛ no dɛ ɔnyɛ no enyisɔ, dɛ dɛm aber yi mu no, ɔbɛkyerɛw dza nyia ɔkyerɛ ase no bɛkã no, na mma ɔmmper dɛ ɔnoara bɛkyerɛ ase.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ Harmony, Pennsylvania, bɛyɛ Ebɔbira 1829 ber mu, ɔwɔ mu dɛ bia wonyaa afã binom so ahyɛse noara wɔ afe 1828 ɔhyewber no. Ha na Ewuradze se Joseph dɛ, emumuyɛfo asesã Lehi nwoma no ne nkrataafa 116 no mu nsɛm a wɔakyerɛ ase wɔ Mormon Nwoma mu no. Dɛm nkrataafa yi na wɔdze hyɛɛ Martin Harris nsa mber kakra ma ɔyewee no. (Hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 3 n’etsifi no). Nsusui bɔn a wonyae nye dɛ wɔbɔtweɔn na sɛ wɔsan kyerɛ dza wɔayew no ase bio wie a woedua nsesã biara a ɔbɛba mu no do dze egu nyia ɔkyerɛɛ ase no n’enyim ase. Dɛm emumuyɛ tsirmpɔw yi a ɔyɛ abɔnsam no susui no yɛ adze a Ewuradze nyim wɔ ber mpo a, nna Mormon, tsetseberdo Abakɔsɛm kyerɛwfo Nephinyi no, rutwitwa nsɛm a ɔwɔ mprɛtse pii no a, ɔwɔ Mormon Nwoma mu no do ntsiantsia no (hwɛ Mormon ne Nsɛm 1:3–7).
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa no nuabanyin Hyrum Smith, wɔ Harmony, Pennsylvania, Esusow Aketseaba, 1829. Joseph nam Urim na Thummim do nyaa ne ntotɔserɛ mpaabɔ na ebisadze ho mbuae. Joseph Smith n’abakɔsɛm kyerɛ dɛ Aaron Asɔfodzi no ne nsanananmu n’ekyir no na orinya nyikyerɛ yi.
Yikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Joseph Knight Panyin, wɔ Harmony, Pennsylvania, Esusow Aketseaba, 1829. Joseph Knight gyee dza Joseph Smith kãe a ɔfa Mormon Nwoma mprɛtse no a ɔwɔ no hɔ no nye nkyerɛase dwuma a nna wogu do reyɛ ase no dzii na mber pii na ɔdze ndzɛmba boaa Joseph Smith na ne kyerɛwfo, ma wotumii kɔr do kyerɛɛ nwoma no ase. wɔ Joseph Knight n’ebisadze ho ntsi, Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze ma onyaa ho nyikyerɛ.
Nsɛm a woyii fii Joseph Smith n’abakɔsɛm mu bi a ɔkã fa Nkɔnhyɛnyi no na Oliver Cowdery hɔn asɔfohyɛ wɔ Aaron Asɔfodzi mu wɔ bea a ɔbɛn Harmony, Pennsylvania, wɔ Esusow Aketseaba 15, 1829. Ɔbɔfo bi a ɔse wɔfrɛ no John, nyia nna wɔfrɛ no John Onumanyi wɔ Ahyɛmu Fofor mu no, nna ɔdze ne nsa guu hɔn do hyɛɛ hɔn asɔfo. Ɔbɔfo no kyerɛɛ mu dɛ ogyina Peter, James na John a wɔyɛ tsetseberdo Asomafo no a wokitsa asɔfodzi a ɔkrɔn a wɔfrɛ no Melchizedek Asɔfodzi no ne nsaafee no ananmu ridzi dɛm dwuma no. Ɔbɔɔ Joseph na Oliver anohoba dɛ mber a ɔfata dur a wɔdze asɔfodzi yi a ɔkrɔn no bɛma hɔn. (Hwɛ ɔfã 27:7–8, 12.)
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa David Whitmer, wɔ Fayette, New York, Ɔbiradzi, 1829. Whitmer ebusua no enya enyigye kɛsenara wɔ Mormon Nwoma no a wɔrekyerɛ ase no ho. Joseph kɛtsenaa Peter Whitmer Panyin, ne fie, ɔtsenaa hɔ kesii dɛ owiee nwoma no n’ase kyerɛ, na ne nsa kãa nwoma no a wɔdze rubopue guado no tum a wɔdze bɔkora do. Whitmer ne mbabanyin baasa no a, hɔn mu kor biara enya dase wɔ edwuma no no nokwar ho no, okitsaa hɔn dzendzen dɛ wobenya hɔn ankorankor dwuma bi edzi wɔ mu. Nyikyerɛ yi, nye ebien a odzi do no (afã 15 na 16) nye mbuae a wɔdze mae wɔ dza wɔnam Urim na Thummim do bisae no ho. Ekyir no, David Whitmer bɛyɛɛ Mormon Nwoma ho Adasegyefo Baasa no mu kor.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa John Whitmer, wɔ Fayette, New York, Ɔbiradzi, 1829. (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 14 n’etsifi no.) Asɛm no hia na ɔfa no nkotoo ho osiandɛ Ewuradze kasa fa dza John Whitmer na Ewuradze nko nyim. Ekyir no, John Whitmer bɛyɛɛ Mormon Nwoma ho Adasegyefo Baawɔtwe no mu kor.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Peter Whitmer Kakraba, wɔ Fayette, New York, Ɔbiradzi, 1829. (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 14 n’etsifi no.) Ekyir no, Peter Whitmer Kakraba bɛyɛɛ Mormon Nwoma ho Adasegyefo Baawɔtwe no mu kor.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Oliver Cowdery, David Whitmer, na Martin Harris, wɔ Fayette, New York, Ɔbiradzi 1829, ansaana wɔrehwɛ mprɛtse a woekrukye Mormon Nwoma mu nsɛm wɔ do no. Joseph na ne kyerɛwfo ehu wɔ Mormon Nwoma a wɔrekyerɛ ase no mu dɛ wobeyi adasefo soronko baasa bi a wɔbɛgye ho dase (hwɛ Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer na Martin Harris nyaa nkenyan bi wɔ hɔn mu ma wonyaa pɛ dɛ wɔbɛyɛ dɛm adasegyefo soronko no. Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze wɔ ho, na nyikyerɛ yi nye mbuae a wɔnam Urim na Thummim no do dze mae.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, Oliver Cowdery na David Whitmer wɔ Fayette, New York, Ɔbiradzi, 1829. Nkɔnyɛnyi no kyerɛ dɛ nyikyerɛ na ɔdaa “asomafo duebien no hɔn ɔfrɛ wɔ nda a odzi ewiei yinom mu nye nkyerɛkyerɛ a ɔfa Asɔr no ne nkyekyeree ho no” edzi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Manchester, New York, bɛyɛ ɔhyewber 1829 mu. Nkɔnhyɛnyi no yi enyim wɔ n’abakɔsɛm no mu dɛ ɔyɛ “mbra a ofi Nyankopɔn hɔ na ommfi nyimpa hɔ a ɔdze maa Martin Harris, nyia ɔyɛ Onnyiewiei no na ɔdze mae.”
Nyikyerɛ a ɔfa Asɔr nhyehyɛɛ na no nhwɛdo ho, wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ anaa bea a ɔbɛn Fayette, New York. Bɛyɛ dɛ wɔdze nyikyerɛ yi n’afã binom no mae ahyɛase noara wɔ afe 1829 ɔhyewber. Nyikyerɛ no nyina no, a dɛm aber no wɔfrɛɛ no Articles and Covenants [Ahyɛmudzi Nsɛmpɔw] no bɛyɛ dɛ wɔkyerɛɛw no Ebɔwbira 6, 1830 (da no ara a wɔkyekyeer Asɔr no), ekyir ara a wɔannkyer ho. Nkɔnhyɛnyi no kyerɛɛwee dɛ “Yɛnam nkɔnhyɛ na nyikyerɛ sunsum do nyaa dza odzi do yi fii no Hɔ [Jesus Christ]; nnyɛ nyimdzee nko na iyi dze maa hɛn, na mbom so ɔkyerɛɛ hɛn da pɔkyee a yɛnam Ne pɛ nye ne mbrasɛm do bɛkyekyer N’asɔr bio wɔ asaase do.”
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no wɔ Fayette, New York, Ebɔbira 6, 1830. Wɔdze nyikyerɛ yi mae wɔ ber a wɔrekyekyer Asɔr no, wɔ da a wɔakã no mu, wɔ Peter Whitmer Panyin, ne fie. Mbarimba beesia a nna woenuma hɔn dada no na wɔkã ho. Hɔn nyina toow aba gyee too mu nyaa pɛ dɛ wobesi nkitsi akyekyer Asɔr no dɛ mbrɛ Nyankopɔn ne mbrasɛm no se (hwɛ Ɔfã 20). Wɔtoow aba so gyee too mu na wɔmaa Joseph Smith Kakraba na Oliver Cowdery tsipia dɛ wɔnyɛ Asɔr no no banodzifo etsitsir. Joseph dze ne nsa guu Oliver do hyɛɛ no elder wɔ Asɔr no mu, na Oliver so yɛɛ dɛmara dze hyɛɛ Joseph elder. Ber a wohyiraa sacrament do dze kɔr aporɔw wiee no, Joseph na Oliver dze hɔn nsa guu ankorankor biara a woehyia hɔ no hɔn etsir do, ma wonyaa Sunsum Krɔnkrɔn no na wosii hɔn pi ma wɔbɛyɛɛ Asɔrmba.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Manchester, New York, Ebɔbira 16, 1830. Wɔdze dɛm nyikyerɛ yi maa Asɔr no osiandɛ nna binom a, woenuma hɔn dada a wɔpɛ dɛ wɔbɔdɔm Asɔr no mmpɛ dɛ wɔsan numa hɔn bio.
Nyikyerɛ enum a ɔtoa do a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Manchester, New York, Ebɔbira 1830, dɛ ɔmfa mma Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith Panyin, na Joseph Knight Panyin. Ɔnam nkorɔfo beenum a wɔabobɔ hɔn edzin no nyaa pɛ kɛse bi dɛ hɔn mu biara bohu hɔn ndwuma a ɔsɛ dɛ wɔyɛ, Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze na onyaa nyikyerɛ maa nyimpa kor biara.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Oliver Cowdery, wɔ Harmony, Pennsylvania, Ayɛwoho, 1830. Ɔwɔ mu dɛ nna wɔkyekyeer Asɔr no nndzii abosoom anan mpo dze, naaso atseetsee no mu bɛyɛɛ dzen, dɛm ntsi okehiaa dɛ banodzifo no kɔhwehwɛ beebi a hɔ yɛ dwoodwo no suma kakra. Wɔdze nyikyerɛ ebiasa a odzi do yi mae wɔ dɛm aber no mu dze ahyɛ hɔn dzen, nkuran na ɔakyerɛkyerɛ hɔn.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Harmony, Pennsylvania, Ayɛwoho, 1830. (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 24 n’etsifi no). Dɛm nyikyerɛ yi da Ewuradze ne pɛ edzi kyerɛ Emma Smith, Nkɔnhyɛnyi ne yer no.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, Oliver Cowdery na John Whitmer wɔ Harmony, Pennsylvania. Ayɛwoho, 1830. (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 24 n’etsifi no).
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no wɔ Harmony, Pennsylvania, Dzifuu 1830. Ber a wɔreyɛ ahoboa akɛyɛ Nyamesom nhyiamu no, a wobehyira sacrament paanoo na wenyin na wɔdze akɔ aporɔw no, Joseph sii mu dɛ ɔrokɔtɔ wenyin no. Ɔsomafo bi a ofi sor hyiaa no na onyaa dɛm nyikyerɛ yi, a no mu bi wɔkyerɛɛw no aber no mu na nkaa no so wɔkyerɛɛw no wɔ Fankwa bosoom a ɔtoa do no mu. Seseiara nsu na wɔdze ahyɛ wenyin ananmu dze yɛ sacrament som wɔ Asɔr no mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Oliver Cowdery, wɔ Fayette, New York, Fankwa, 1830. Hiram Page, a ɔyɛ Asɔrba no, nyaa ɔbo bi a ɔgyee too no do dɛ ɔboa no ma onya nyikyerɛ a ɔfa Zion ne nkyekyeree nye Asɔr no mu nhyehyɛɛ ho. Dɛm nsɛmsɛm yinom daadaa asɔrmba no mu dodowara, na nsɛmnsɛm yinom nyaa nhyɛdo bɔn wɔ Oliver Cowdery so mpo do. Aka kakra ma wɔakɔ ehyiadzi bi a wɔahyehyɛ ato hɔ no, Nkɔnhyɛnyi no bɔɔ mpaa enyiberdo bisaa Ewuradze wɔ dɛm asɛm no ho, na dɛm nyikyerɛ yi na onyae.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi, no do dze mae wɔ Elderfo beesia enyim, wɔ Fayette, New York, Fankwa, 1830. Wɔdze nyikyerɛ yi mae no, nda kakra ansaana wɔrebɛyɛ ehyiadzi, a wɔhyɛɛ ase Fankwa 26, 1830 no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa David Whitmer, Peter Whitmer Kakraba, na John Whitmer, wɔ Fayette, New York, Fankwa, 1830, ndaansa ehyiadzi a wɔyɛɛ no Fayette ekyir no, mbom ansaana Asɔr no mu Elderfo no repetse. Ahyɛse no wɔdze nsɛm yi puee guado dɛ nyikyerɛ ebiasa; Nkɔnhyɛnyi no kãa bɔɔ mu yɛɛ no Ɔfã kor wɔ ber a woritsintsim 1835 wɔ Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi nwoma no mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Thomas B. Marsh, Fankwa, 1830. Wowiee Asɔr Ehyiadzi no yɛ ara na dɛm asɛm yi sii (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 30 n’etsifi no). Nna woenuma Thomas B. Marsh wɔ dɛm bosoom n’ahyɛse no mu na wɔahyɛ no elder wɔ Asɔr no mu ansaana wɔdze dɛm nyikyerɛ yi rema.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Parley P. Pratt na Ziba Peterson, wɔ Manchester, New York, Ɔbɛsɛ, 1830 ahyɛse no. Elderfo no nyaa enyigye na pɛ kɛse bi wɔ Lamanfo no hɔn nhyira a ɔbɛba hɔn do a Asɔr no ehu ho asɛm wɔ Mormon Nwoma mu no ho. Ɔnam dɛm ntsi, wɔtotɔee serɛɛ dɛ Ewuradze nkyerɛ Ne pɛ sɛ wɔnsoma Elderfo no wɔ dɛm aber no ma wɔnkɔ Indiafo ebusuakuw no a wɔwɔ Anee apaamu hɔ no hɔ. Nyikyerɛ kãa do.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Ezra Thayre na Northrop Sweet, wɔ Fayette, New York, Ɔbɛsɛ, 1830. Ber a ɔreyi dɛm nyikyerɛ yi enyim no, Joseph Smith n’abakɔsɛm no si no pi dɛ “Ewuradze … ayɛ krado aber nyina dɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ hɔn a wɔdze gyedzi hwehwɛ no enyiberdo no.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Orson Pratt, wɔ Fayette, New York, Ɔberɛfɛw 4, 1830. Aber no nna Onuabanyin Pratt edzi mfe duakron. Nna oedzi kan atse asɛmpa no efi no nua panyin, Parley P. Pratt hɔ, ma ɔasakyer no na oenuma no ma adapɛn esia etwa mu. Onyaa dɛm nyikyerɛ yi wɔ Peter Whitmer Panyin ne fie.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Fayette anaa beebi a ɔbɛn Fayette, wɔ New York, Mumu 7, 1830. Dɛm aber no mu, nna Nkɔnhyɛnyi no n’edwuma a ɔyɛ no dabiara nye ɔkyerɛ Bible no ase. Wɔhyɛɛ nwoma no ase kyerɛ wɔ Ɔbiradzi, 1830, aber no, nna Oliver Cowdery na John Whitmer nyina asom dɛ akyerɛwfo. Ɔnam dɛ, afei wɔafrɛ hɔn ama hɔn edwuma fofor ntsi, wɔnam frɛ krɔnkrɔn do frɛɛ Sidney Rigdon dɛ ɔmbɛyɛ Nkɔnhyɛnyi no ne kyerɛwfo wɔ dwumadzi no mu (hwɛ nkyekyɛmu 20). Nsɛm a ɔyɛ nyikyerɛ yi ne nyienyim no, Joseph Smith n’abakɔsɛm kã dɛ: “Mumu mu na Sidney Rigdon [fii Ohio] baa dɛ oribebisa biribi efi Ewuradze hɔ, na Edward Partridge kã noho ma wɔbae. … Enuanom beenu no bodurii no, annkyɛr na Ewuradze kasaa dɛ.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Edward Partridge, wɔ beebi a ɔbɛn Fayette, New York, Mumu 9, 1830 (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 35 n’etsifi no). Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ Edward Partridge “yɛɛ fasusu ma tseneneeyɛ, na ɔyɛ Ewuradze no nkorɔfo etsitsir no mu kor.”
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ beebi a ɔbɛn Fayette, New York, Mumu, 1830. Ha na wɔdze mbrasɛm a odzi kan a ɔfa mbrɛ wobesi aboaboa asɔrmba no ano wɔ mberano yi mu no mae.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Fayette, New York, Sanda 2, 1831. Aber no, nna Asɔr no reyɛ ehyiadzi kɛse bi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa James Covel, wɔ Fayette, New York, Sanda 5, 1831. James Covel a ɔayɛ Methodist sɔfo bɛyɛ mfe eduanan no nye Ewuradze dzii ahyɛmu dɛ obedzi mbrasɛm biara a Ewuradze bodua Joseph Nkɔnhyɛnyi no do dze ama no do.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Fayette, New York, Sanda 6, 1831. Ansaana wɔrebɛkyerɛw dɛm nyikyerɛ yi no, Nkɔnhyɛnyi no n’abakɔsɛm no kã dɛ, “Osiandɛ James Covel poow Ewuradze n’asɛm no ntsi, na ɔfaa ne fapem dadaw no do na ɔsanee kɔr no nkorɔfo nkyɛn no, Ewuradze dze nyikyerɛ yi maa emi na Sidney Rigdon” (hwɛ ɔfã 39).
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Asɔr no wɔ Kirtland, Ohio, Kwakwar 4, 1831. Nyikyerɛ yi kyerɛkyerɛ Nkɔnhyɛnyi no na Asɔr Elderfo dɛ wɔmbɔ mpaa ngye Nyame Ne “mbra” (hwɛ ɔfã 42). Joseph Smith fii New York bodur Kirtland ara na Leman Copley, asɔrba a ɔwɔ Thompson, Ohio a ɔbɛn hɔ no. “serɛɛ Onuabanyin Joseph na Sidney [Rigdon] … dɛ wɔnye no mbɛtsena na ɔbɛma hɔn adan na edziban.” Nyikyerɛ yi a odzi do yi kyerɛ mu bea a Joseph na Sidney wɔ dɛ wɔtsena na ɔfrɛ Edward Partridge so ma ɔbɛyɛ Asɔr no ne bishop a odzi kan.
Nyikyerɛ a wɔmaa no afã ebien a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Kwakwar 9 na 23, 1831. Ɔfã a odzi kan no yɛ nkyekyɛmu 1 dze kesi 72, nsa kãe wɔ ber a elderfo duebien no wɔ hɔ, na ɔhyɛɛ Ewuradze n’anohoba a ɔbɔɔ no dada dɛ wɔdze “mbra” no bɛma wɔ Ohio no mã (hwɛ Ɔfã 38:32). Ɔfã a otsĩa ebien no yɛ nkyekyɛmu 73 dze kesi 93. Nkɔnhyɛnyi no kyerɛ mu dɛ “Asɔr no ne mbra nyina hyɛ” dɛm nyikyerɛ yi mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Kwakwar, 1831. Aber yi no nna osian ator a nkorɔfo binom ridzi dɛ wɔyɛ nyikyerɛfo ntsi, Asɔrmba no mu binom retseetsee. Nkɔnhyɛnyi no bɔɔ mpaa bisaa Ewuradze na onyaa dɛm mbuae yi a wɔdze maa Asɔr no mu elderfo no. Dza odzi kan no fa Asɔr no n’amambu ho; dza odzi ewiei no yɛ kɔkɔbɔ a ɔwɔ dɛ elderfo no dze bɔ aman a wɔwɔ asaase do.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Kirtland, Ohio, ber a Kwakwar rokɔ n’ewiei, 1831. Asɔr no hyehyɛɛ dɛ wɔbɛyɛ ehyiadzi wɔ Obiradzi a ɔreba no n’ahyɛse dze edzi dza wɔakyerɛw wɔ ha yi ho dwuma.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Asɔr no, wɔ Kirtland, Ebɔw 7, 1831. Dza Joseph Smith n’abakɔsɛm kã dze yɛ nyikyerɛ yi ne nyienyim nye dɛ “dɛm aber yi.nkorɔfo tsintsim atorsɛm … na nsɛnhun pii wɔ Asɔr no ho … na wɔdze puee guado … dɛ wɔdze risiw nkorɔfo a wɔpɛɛ dɛ wɔyɛ mpɛnsampɛnsamu wɔ dwumadzi no ho anaadɛ wosuo gyedzi no mu no kwan. … Mbom Ahotseweefo no benyaa enyigye, … me nsa kãa dza ɔtoa do yi.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Asɔr no, wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 8, 1831. Asɔr no n’ahyɛse no, nna wonnyi nhyehyɛɛ kor a wɔhwɛ do yɛ som wɔ Asɔr no mu. Naaso nna wɔayɛ nhyehyɛɛ bi ato hɔ a asɔrmba nye hɔn a woesi nketse dɛ wɔrohwehwɛ Asɔr no mu no nko na wɔma hɔn kwan ma wɔba sacrament som nye Asɔr no ne nhyiamu bi ase. Nyikyerɛ yi na ɔkyerɛ kwan a, Ewuradze pɛ dɛ wɔfa do hwɛ som no do nye ne nhyiamu dwumadzi do na No kwankyerɛ wɔ wɔrehwehwɛ na worinya nhumu wɔ Sunsum akyɛdze mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 8, 1831 John Whitmer a, nna ɔasom dadaw dɛ Nkɔnhyɛnyi no ne krakye no twetwee noho ahyɛse no ber a wɔsee no dɛ ɔnsom dɛ Asɔr n’abakɔsɛmkyerɛwfo na ɔkyerɛwfo no, a ɔbɛhyɛ Oliver Cowdery n’ananmu no. Ɔkyerɛɛw dɛ, “Nkyɛ mennkɛpɛ dɛ mebɛyɛ naaso muhun dɛ Ewuradze Ne pɛ na ɔnyɛ, na sɛ dɛm na ɔpɛ a, mebɛpɛ dɛ obodua Joseph Adzehunyi no do ada no edzi.” Joseph nyaa nyikyerɛ yi ekyir no, John Whitmer gyee too mu na ɔsoom wɔ dzibew a wɔdze ahyɛ ne nsa no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 10, 1831. Nkɔnhyɛnyi no ebisa Ewuradze kwan a wɔmfa do nnya nsaase mma Ahotseweefo no ma wɔntsena do. Iyi yɛ asɛnhia kɛse osiandɛ asɔrmba no wɔ dɛ wodzi dza Ewuradze ahyɛ hɔn dɛ wontu mmfi America boka apaamu mbehyia mu wɔ Ohio no do (hwɛ afã 37:1–3; 45:64).
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Sidney Rigdon, Parley P. Pratt na Leman Copley, wɔ Kirtland, Ohio, Esusow Aketseaba 7, 1831. Leman Copley agye asɛmpa no na mbom ɔda ho gye kuw bi a ɔdze Shakers [Awosowawosowhofo] (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Christ ne Mbae a Otsĩa Ebien ho Agyedzifo Koryɛ Kuw]), a nkyɛ ɔdɔm no, hɔn nkyerɛkyerɛ no mu bi dzi. Dza Shakerfo gye dzi no mu bi nye dɛ Christ ne Mbae a Otsĩa Ebien no esi dada na Ɔbae wɔ ɔbaa su do, ɔyɛ Ann Lee. Wosusuu dɛ nsu enuma ho nnhia. Wɔpoow awɔr na wɔgyee abrabɔ a awar mu nkitahodzi biara nnkã ho. Shakerfo mu binom braa bɔnam ne dzi. Dza Joseph Smith n’abakɔsɛm kã dze yɛ nyikyerɛ yi ne nyienyim nye dɛ, “Mbrɛ ɔbɛyɛ a mebɛtse nsɛmfua yi ase yie no, mobɔɔ mpaa bisaa Ewuradze, na minyaa nyikyerɛ a ɔtoa do yi.” Nyikyerɛ no tsia Shaker Kuw no dza wɔgye dzi no mu bi. Onua a woedzi kan abɔ ne dzin no dze nyikyerɛ a wɔkyerɛwee no bi kyerɛɛ Shaker Kuw no (wɔ bea bi a ɔbɛn Cleveland, Ohio) na ɔkenkaan ne nyinara kyerɛɛ hɔn, na mbom wɔpowee.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Esusow Aketseaba 9, 1831. Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ elderfo no binom nntse esunsum ahorow a wɔatahye asaase no do no hɔn dwumadzi ase, na dɛ, n’ebisadze soronko yi a ɔfa dɛm asɛm yi ho ntsi na wɔdze dɛm nyikyerɛ yi mae. Nna dza wɔfrɛ no sunsum mu ndzeyɛɛ ho nsɛm rokɔ do wɔ asɔrmba no mu pii mu, binom se woenya enyido-adzehu na nyikyerɛ.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Thompson, Ohio, Esusow Aketseaba 20, 1831. Aber yi no, nna Ahotseweefo no a woetu efi boka nkurow do no ahyɛ ase dɛ worudu Ohio, dɛm ntsi, nna ekehia dɛ wɔyɛ nhyehyɛɛ a ɔbɛma woenya beebi atsena. Na ɔnam dɛ, nna dɛm dwumadzi no yɛ bishop ne ɔfrɛ ntsi, Bishop Edward Partridge bisaa dza ɔnyɛ wɔ dɛm adze no ho, na Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Asɔr no mu Elderfo no, wɔ Kirtland, Ohio, Obiradzi 6, 1831. Wɔyɛɛ ehyiadzi bi wɔ Kirtland a, wɔhyɛɛ ase wɔ Obiradzi 3 na wowiee Obiradzi 6. Ehyiadzi yi ase no nye da a odzi kan a wɔhyɛɛ sɔfopanyin dzibew na ator na ndaadaa sunsum dwumadzi bi daa edzi na wɔkãa hɔn enyim.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Algernon Sidney Gilbert, wɔ Kirtland, Ohio, Obiradzi 8, 1831. Ɔnam Sidney Gilbert n’ebisadze no ntsi, Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze dza ɔfa Onuabanyin Sidney Gilbert n’edwuma na ɔfrɛ ho wɔ Asɔr no mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Newel Knight, wɔ Kirtland, Ohio, Obiradzi 10, 1831. Osian nsɛmbisa bi a ɔfa egyapadze a wɔdze abɔ afɔr ho ntsi, Asɔrmba a wɔtse Thompson, Ohio, no hɔn mu paapaae. Pɛsɛankonya na edzifodzipɛ daa edzi wɔ hɔn mu. N’asɛmpakã dwuma wɔ Shakerfo mu ekyir no (hwɛ ɔfã 49 etsifi nsɛm), Leman Copley buu n’ahyɛmu a odzii a ɔkyerɛ dɛ ɔdze n’asaase kɛse bɛma Ahotseweefo a wofi Colesville, New York reba no ma wɔatsena do no do. Osian iyi ntsi, Newel Knight (hɔn a wɔtse Thompson hɔn banodzinyi) na elderfo binom baa Nkɔnhyɛnyi ne nkyɛn bebisaa no dza wɔnyɛ. Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze na onyaa nyikyerɛ yi, a ɔhyɛ Asɔrmba a wɔtse Thompson dɛ womfi Leman Copley n’asaase do na wontu kwan nkɔ Missouri.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa William W. Phelps, wɔ Kirtland, Ohio, Obiradzi 14, 1831. Nna mbrɛana William W. Phelps a, ɔyɛ obi a otsintsim nwoma, nye n’ebusua ebodu Kirtland, na Nkɔnhyɛnyi no bɔɔ mpaa bisaa no ho nsɛm fii Ewuradze hɔ.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Obiradzi 15, 1831. Nyikyerɛ yi tsẽa Ezra Thayre dɛ woenndzi nyikyerɛ a wɔdze ama dadaw no do (“mbrasɛm” a wɔakã ho asɛm wɔ nyiyimu 8 no), a Joseph Smith nyaa maa no no, a ɔkyerɛ Thayre fa no ndwuma wɔ Frederick G Williams asaase a ɔtse do no do. Nyikyerɛ yi a odzi do yi no twe Thayre ne frɛ dɛ ɔnye Thomas B. Marsh ntu kwan nkɔ Missouri no san ekyir (hwɛ ɔfã 52:22).
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Zion, Jackson County, Missouri, Ayɛwoho 20, 1831. Dɛ mbrɛ Ewuradze hyɛe no dɛ wontu kwan nkɔ Missouri, bea a Ɔbɛda hɔn “egyapadze asaase” edzi no (ɔfã 52), elderfo no tuu kwan fi Ohio kɔr Missouri n’anee afamu n’ahẽ do. Joseph Smith dwendween Lamanfo no hɔn gyinabew ho na ɔyɛɛ no nwanwa: “Aber bɛn na sar no bɛhan dɛ rose-nhyiren? Aber bɛn na wɔbɛkyekyer Zion wɔ n’enyimnyam mu, na henfa na wobesi Wo temple no, bea a aman nyina bɛba hɔ wɔ nda a odzi ekyir no mu?” Ekyir no onyaa nyikyerɛ yi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Zion, Jackson County, Missouri, Dzifuu 1, 1831. Ahomgyeda a odzi kan n’ahyɛse noara no, ber a Nkɔnhyɛnyi no nye n’akãdofo no dur Jackson County a ɔwɔ Missouri, nna wɔayɛ som ma woenuma nyimpa beenu na wɔagye hɔn ato mu. Dɛm dapɛn no mu ara no, Colesville Ahotseweefo a wofi Asɔr no no Nkorbata a ɔwɔ Thompson no hɔn mu binom nye binom so bae (hwɛ Ɔfã 54). Hɔn mu dodowara na wɔpɛɛ dɛ wobohu dza Ewuradze pɛ dɛ wɔyɛ wɔ bea fofor a wɔaboa ano wɔ no do.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Zion, Jackson County, Missouri, Dzifuu 7, 1831. Ansaana nsa rebɛkã nyikyerɛ yi no, wɔtseew asaase no ho dɛ mbrɛ Ewuradze see hɔn dɛ wɔnyɛ no, na wotuu bea a ndaamba wobesi temple no hyɛɛ Ewuradze ne nsa. Da no a nsa kãa nyikyerɛ no, nna Polly Knight, Joseph Knight Panyin ne yer wui, Asɔrba a odzi kan a owuu wɔ Zion. Asɔrmba abɔasefo fa nyikyerɛ yi dɛ “nkyerɛkyerɛ a wɔdze ma Ahotseweefo no wɔ mbrɛ wonsi nsie ahomgyeda no na mbrɛ wonsi ndzi mbuada na wɔmbɔ mpaa.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Independence, Jackson County, Missouri, Dzifuu 8, 1831. Dɛm aber no, elderfo a woetu kwan akɔ Jackson County na wɔdze hɔn ho hyɛɛ asaase no na temple asaase a wotuu hyɛɛ Nyame nsa no, pɛɛ dɛ wobohu dza ɔwɔ dɛ wɔyɛ.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Missouri nsu n’egya, McIlwaine’s Bend, Dzifuu 12, 1831. Ber a Nkɔnhyɛnyi no na elderfo du resan hɔn ekyir akɔ Kirtland no, wɔdze hɛmba twaa Missouri Esutsen no. Da a otsĩa ebiasa wɔ hɔn akwantu mu no, wohyiaa mbusu pii. Elder William W. Phelps nyaa enyido-adzehu ewiaber, ohun ɔsɛɛfo no dɛ ɔdze tum nam esu n’enyi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Missouri esu n’egya wɔ Chariton, Missouri, Dzifuu 13, 1831. Da no, Nkɔnhyɛnyi no nye no kuw a wofi Independence rokɔ Kirtland no hyiaa elderfo pii a wɔrokɔ Zion asaase do no, na ber a wɔdze enyigye kyiakyiaa hɔnho wiei no, nna onyaa nyikyerɛ yi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Dzifuu 30, 1831. Nkɔnhyɛnyi no, Sidney Rigdon na Oliver Cowdery fi hɔn nsera wɔ Missouri ebodu Kirtland wɔ Dzifuu 27. Joseph Smith n’abakɔsɛm kyerɛ nyikyerɛ yi mu dɛ: “Ber a Asɔr yi ahyɛ ase yi, ɔwɔ dɛ yɛper dɛ yebenya Ewuradze n’asɛm ne beebiara a ohia ma hɛn nkwagye; na dɛ mbrɛ Zion asaase ayɛ adze a osi hɛn enyi do tsitsir no, mibisaa Ewuradze dɛ ɔmma munhu dza ɔwɔ dɛ yɛyɛ a, ɔfa mbrɛ yebesi yɛaboa Ahotseweefo no ano, na yɛatɔ asaase, na ndzɛmba binom so a ɔkekã ho.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Asɔr no mu elderfo, wɔ Kirtland, Ohio, Fankwa 11, 1831. Nna Nkɔnhyɛnyi no roboaboa noho akɔ Hiram, Ohio akɔsɔw Bible a ɔrekyerɛ ase, ogyaa mu guu hɔ wɔ ber a ɔwɔ Missouri no do. Enuanom kuw bi a nna wɔahyɛ hɔn dɛ wontu kwan nkɔ Zion (Missouri) no gu do roboaboa hɔnho enyiber do na wɔahyɛ hɔn akwantu no ase Ɔbɛsɛ mu. Ahokyer ber yi mu no, na nsa kãa dɛm nyikyerɛ yi.
Mpaabɔ ho nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔbɛsɛ 30, 1831.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔbɛsɛ 29, 1831. Nna William E. McLellin atotɔ aserɛ Ewuradze kokoa mu dɛ Ondua Nkɔnhyɛnyi no mu nda nsɛmbisa enum a Joseph Smith nnyim ho hwee no ho mbuae no edzi. McLellin n’ebisadze ho ntsi Nkɔnhyɛnyi no bisae na onyaa nyikyerɛ yi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔberɛfɛw, 1831 ahyɛse ara no. Dɛm aber no nna wɔreyɛ ehyiadzi soronko bi, na nyikyerɛ a Nkɔnhyɛnyi no ne nsa akã dada efi Ewuradze hɔ no na wɔdze robɔto gua wɔdween ho na wodzii ho dwuma (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 1 n’etsifi no). Nna William W. Phelps dze ntsintsimfir bɔbɔɔ adze wɔ Independence, Missouri no ɔnkyɛree. Ehyiadzi no bɔɔ adwenpɔw dɛ wɔdze nyikyerɛ no bopue guado dɛ ɔyɛ Book of Commandments (Mbrasɛm Nwoma) na woetsintsim nwoma dodow 10,000 (a ɔnam ɔhaw a nna enyi nnda do ntsi ekyir no wɔtseew do baa nwoma dodow 3,000). Enuanom a woehyia no mu dodowara nam Sunsum Krɔnkrɔn do gyee dase dɛ nyikyerɛ a wɔahyehyɛ a wɔdze rubopue guado no nyina yɛ nokwar. Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ ber a ne nsa kãa nyikyerɛ a ɔyɛ Ɔfã 1 ekyir no, nsɛm fofor binom a otsia kasa a wɔdze kyerɛɛw nyikyerɛ no pue. Aber no na nyikyerɛ a odzi do yi bae.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔberɛfɛw 1, 1831, ɔyɛ mpaabɔ ho mbuae dɛ dza ɔwɔ Ewuradze nda N’adwen a ɔfa Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson na William E. McLellin ho no edzi. Wɔdze nyikyerɛ n’afã bi maa mbanyin baanan yinom dze, naaso no mu nsɛm ne kɛse noara fa Asɔr tɔw ne nyina ho. Nyikyerɛ yi wɔtserɛw mu wɔ Joseph Smith no kwankyerɛ ase ber a wotsintsimii no wɔ afe 1835 Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi nwoma no mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔberɛfɛw 11, 1831. Wɔgyee nyikyerɛ nyina a wɔyɛɛ adwen dɛ wobedzi kan etsintsim na wɔdze epue guado no too mu wɔ ehyiadzi soronko bi a wɔyɛɛ wɔ Ɔberɛfɛw 1–2. Ɔberɛfɛw 3 mu na wɔdze nyikyerɛ a ɔwɔ Ɔfã 133, no kãa ho a ekyir no wɔfrɛɛ no Mbuaekyir. Nna woeyi Oliver Cowdery dɛ ɔmfa nyikyerɛ na mbrasɛm nwoma no a wɔahyehyɛ ato hɔ no nkɔ Independence, Missouri, ma wontsintsim. Nna ɔwɔ dɛ ɔdze sika a wɔagyegye dɛ wɔdze rekɛkyekyer Asɔr no wɔ Missouri no so kã ho. Nyikyerɛ yi kyerɛ John Whitmer dɛ ɔnkã Oliver Cowdery ho na ɔnkyerɛ Whitmer so dɛ ontu kwan mboaboa abakɔsɛm ho ndzɛmba ano wɔ ne frɛ mu dɛ Asɔr abakɔsɛmkyerɛwfo na ɔkyerɛwfo.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔberɛfɛw 12, 1831. Nkɔnhyɛnyi no n’abakɔsɛm no kã dɛ, ofi Ɔberɛfɛw 1 kesi Ɔberɛfɛw 12 no nna wɔayɛ ehyiadzi soronko anan. Ehyiadzi no mu dza odzi ewiei no ase no, wɔdwendween nyikyerɛ horow a ɔsom bo a ekyir no wɔdze bopue guado dɛ Book of Commandments (Mbrasɛm Nwoma) na nkyii no Doctrine and Covenants (Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi) no wosusuu ho. Nyikyerɛ yi ehyiadzi no toow amba dɛ “ɔsom bo ma Asɔr no dɛ wiadze yi mu ahonyadze nyina no” na wɔdze mae. Joseph Smith n’abakɔsɛm kyerɛ dɛ nyikyerɛ yinom nye “Asɔr no ne fapem wɔ nda a odzi ekyir yinom mu, na ɔyɛ mfaso ma wiadze, na ɔbɛda no edzi dɛ hɛn Agyenkwa n’ahenman mu esumadze ne nsaafee no wɔdze asan ama nyimpa bio.”
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Hiram, Ohio, Mumu 1, 1831. Nna Nkɔnhyɛnyi no rosɔw Bible a ɔrekyerɛ ase no do na Sidney Rigdon nye ne kyerɛwfo kesii dɛ nsa kãa dɛm nyikyerɛ yi, dɛm aber no, wogyaa mu kakra ama woeetum ayɛ dza ɔwɔ nyikyerɛ yi mu a wɔase hɔn dɛ wɔnyɛ no. Enuanom no wɔ dɛ wɔkɛkã nyamesɛm no dze dwedwe adwen bi a nkorɔfo enya a otsia Asɔr no, wɔ nkrataa a Ezra Booth a, ɔatsew etua efi Asɔr no mu no akyerɛw a wɔdze epue guado no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Mumu 4, 1831. Elderfo na Asɔrmba pii hyiaa dɛ worubosũa hɔn ndwuma nye Asɔr no mu nkyerɛkyerɛ a ɔbɛma woenya mpontu. Nyikyerɛ ebiasa na wonyaa no da no ara mu na wɔkãa bɔɔ mu wɔ dɛm Ɔfã yi mu. Nkyekyɛmu 1 dze kesi 8 daa mbrɛ wosii frɛɛ Newel K. Whitney yɛɛ no bishop no edzi. Wɔfrɛɛ no na wɔhyɛɛ no bishop, na ekyir no wonyaa nkyekyɛmu 9 dze kesi 23, yɛ nsɛm bi so a wɔkãa dze kãa bishop no ndwuma no ho. Ɔno ekyir no wɔdze nkyekyɛmu 24 dze kesi 26 mae a, ɔma nkyerɛkyerɛ a ɔfa mboaboa ano akɔ Zion ho.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Hiram, Ohio, Sanda 10, 1832. Ofitsi Mumu bosoom a otwaa mu no n’ahyɛse na Joseph na Sidney hyɛɛ ase dɛ worikyin kã nyamesɛm, na iyi maa adwensɛɛ a nkorɔfo nyae wɔ Asɔr no ho no kɔr famu (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 71 n’etsifi no).
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ Wayne County, New York wɔ afe 1830 mu. Ansaana wɔrebɛkyekyer Asɔr no mpo no, nsɛmbisa soɛree a ɔfa kwan pa a wɔdze numa ho a, ogyaa Nkɔnhyɛnyi no ma ɔkɔhwehwɛɛ nyiano wɔ asɛngyinado no ho. Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ nyikyerɛ yi yɛ 1 Corinthfo 7:14 ne nkyerɛkyerɛmu, kyerɛwsɛm a nna wɔtaa dze gye mbofra enuma abamba.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Amherst, Ohio, Sanda 25, 1832. Nyikyerɛ asorɔtow ebien na ɔwɔ ɔfã yi mu (dza odzi kan no wɔ nkyekyɛmu 1 dze kesi 22 na dza otsĩa ebien no wɔ nkyekyɛmu 23 dze kesi 36) a wɔmaa no dakor noara mu. Dɛm aber no yɛ ehyiadzi ase a wɔmaa Joseph Smith tsipia na wɔhyɛɛ no Asɔfodzi a Ɔkrɔn no ne President. Elderfo binom pɛɛ dɛ wosua hɔn edwuma a wɔrekɛyɛ no aber no mu no ho ndzɛmba yie. Nyikyerɛ yinom na ɔtoaa do.
Enyido-adzehu a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Hiram, Ohio, Kwakwar 16, 1832. Dza Joseph Smith n’abakɔsɛm kã dze yɛɛ dɛm enyido-adzehu no ne nyienyim nye dɛ: “Aber a mifii Amherst ehyiadzi ase bae no, mehyɛɛ ase dɛ merekyerɛ kyerɛwsɛm no ase. Sɛ yɛhwɛ nyikyerɛ dodow no a, ɔda edzi pefee dɛ woeyiyi nsɛm pii a ɔfa nyimpa no nkwagye ho no, efi Bible no mu, anaadɛ ɔyewee ansaana wɔrebɛkã aboa ano. Nokwar, dza ɔakã no da noho edzi pefee dɛ, sɛ Nyankopɔn botua ankorankor biara kaw dɛ mbrɛ no ndwuma a ɔyɛe wɔ ber a ɔtse ase no tse dze a, nna ‘Sor’ no a wɔkyerɛ dɛ ɔyɛ Ahotseweefo hɔn onnyiewiei fie no bɛyɛ ahenman pii na nnyɛ kor. Dɛm ntsi, … ber a emi na Elder Rigdon yegu do rekyerɛ Ɔhotseweenyi John n’Asɛmpa no ase no, yehun enyido-adzehu a ɔtoa do yi.” Ber a wɔdze enyido-adzehu yi mae no, nna Nkɔnhyɛnyi no rekyerɛ John 5:29 no ase.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ Hiram, Ohio, bɛyɛ Ebɔw, 1832. Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ, “Ber a merekyerɛ Kyerɛwsɛm no ase no, na menyaa Ɔhotseweenyi John ne Nyikyerɛ no ne nkyerɛkyerɛmu a odzi do yi.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 1, 1832. Dɛm da no, nna Nkɔnhyɛnyi no nye banodzifo binom so ehyia dɛ wɔrebɛpɛnsampɛnsam Asɔr edwumayɛ ho. Ahyɛse no nyikyerɛ yi kyerɛɛ Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, na Newel K. Whitney dɛ wontu kwan nkɔ Missouri na wɔnkɛtsew “edwumadze” a ɔbɔhwɛ Asɔr no n’adzetɔn na nwomatsintsim edwuma a wɔbɛkyekyer no no fotow a wobenya ama Zion ne ntsimii na ama wɔaaboa ehiafo. Edwumadze yi a, wɔfrɛ no Nkabɔmu Edwumadze no, wɔkyekyeree no wɔ Ebɔbira 1832 na woguu no afe 1834 mu (hwɛ ɔfã 82). Woguu no no mber kakra ekyir no, wɔ Joseph Smith no kwankyerɛ ase no, kasasin “ehiafo adzekoradan ho nsɛm no” bɛsesaa “n’adzetɔn na nwomatsintsim edwuma” no wɔ nyikyerɛ no mu, na nkasafua “nhyehyɛɛ” sesaa nkasafua “edwumadze.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Hiram, Ohio, Ebɔw 12, 1832.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Stephen Burnett, wɔ Hiram, Ohio, Ebɔw 7, 1832.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ebɔw 15, 1832. Wɔfrɛ Frederick G. Williams dɛ ɔmbɛyɛ sɔfopanyin na ɔpamfo wɔ Asɔfodzi a Ɔkrɔn ne President na n’Apamfo kuw no mu. Abakɔsɛm a wɔkyerɛwee too hɔ no kyerɛ dɛ ber a nsa kãa nyikyerɛ yi wɔ Ebɔw, 1832 no, wɔfrɛɛ Jesse Gause dɛ ongyina dzibew dɛ Joseph Smith ne pamfo wɔ President na n’Apamfo kuw no mu. Na ɔnam dɛ oenntum annkɔ dwumadzi no do dɛ mbrɛ ɔsɛ no ntsi, wɔdaan frɛ no maa Frederick G. Williams. Nyikyerɛ a wonyaa no (Ebɔw, 1832) kyerɛ dɛ, nna wɔahyɛ ase dɛ wɔrehyehyɛ dwumadzi a ɔwɔ President a Odzi Kan na n’Apamfo Kuw no mu no, nkanka ɔpamfo dzibew no frɛ wɔ kuw no mu na enyidzi a ɔbata hɔn dwumadzi no ho. Onuabanyin Gause dzii dwuma no mber kakra, mbom, woyii no edzi fii Asɔr no mu Mumu, 1833. Wɔhyɛɛ Onuabanyin Williams wɔ dzibew soronko yi mu Ebɔw 18, 1833.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no wɔ Independence, Jackson County, Missouri, Ebɔbira 26, 1832. Da no nna Asɔr n’asɔfompanyifo na elderfo abaguafo ehyia. Abaguafo nhyiamu no woyii Joseph Smith tsipia dɛ ɔno nyɛ Asɔfodzi a Ɔkrɔn no ne President, a ɔyɛ dzibew no a wɔahyɛ no dada no wɔ asɔfompanyin, elderfo na asɔrmba ehyiadzi kɛse bi a wɔyɛe wɔ Amherst, Ohio, Sanda 25, 1832 no ase (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 75 n’etsifi no). Nyikyerɛ yi si nkyerɛkyerɛ a wɔmaa no wɔ nyikyerɛ (ɔfã 78) a wɔama no dadaw no do dɛ wɔnkyekyer edwumadze—a wɔfrɛ no Nkabɔmu Edwumadze (Joseph Smith no kwankyerɛ ase no, dzin “nhyehyɛɛ” ekyir no bɛsesaa “edwumadze”)—wɔdze hwɛɛ Asɔr no n’adzetɔn na nwomatsintim edwuma do.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Independence, Missouri, Ebɔbira 30, 1832. Ber a Nkɔnhyɛnyi no nye no nuanom abɔ ngua refa apam no, nna onyaa dɛm nyikyerɛ yi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Fankwa 22 na 23, 1832. Onyaa nyikyerɛ yi wɔ Fankwa bosoom mu, wɔ ber a nna elderfo a wɔkɔree kɛyɛɛ nyamedwuma wɔ boka mbew do no ahyɛ ase dɛ wɔresan hɔn ekyir aba ebobu hɔn dwumadzi ho nkontaa no. Ber a wɔdze enyigye hyiaa mu no, nna nsa kãa nyikyerɛ a ɔtoa do yi. Nkɔnhyɛnyi no frɛɛ no asɔfodzi ho nyikyerɛ.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Ɔberɛfɛw 27, 1832. Dɛm ɔfã yi fi krataa bi a Nkɔnhyɛnyi no kyerɛwee kɛmaa William W. Phelps a nna ɔtse Independence, Missouri. Ɔyɛ asɛmbisa binom no mbuae a ɔfa Ahotseweefo a wofi hɔ kɔɔr Zion a woenndzi mbrasɛm no dɛ wɔmfa hɔn egyapadze mbɔ afɔr no do a nna hɔn nsa nnkãa hɔn egyapadze dɛ mbrɛ Asɔr no ahyehyɛ ato hɔ no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Mumu 6, 1832. Ber a Nkɔnhyɛnyi no rekenkan Bible a nna wɔakyerɛ ase no mu na ɔasa mu no na ne nsa kãa nyikyerɛ yi.
Nyikyerɛ na nkɔnhyɛ a ɔfa ɔkõ ho a, wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland Ohio, anaa bea a ɔbɛn, Mumu 25, 1832. Aber yi mu no nna wentwiwentwi a ɔrokɔ do wɔ United States a ɔfa ndɔnkɔyɛ nye Carolina Anaafo a wogyaa dɛ wɔbɛgyegye tow ama federal ɔman no atahye. Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ “ɔhaw a orupuepue wɔ amanaman ntamu no reda edzi” kyerɛ Nkɔnhyɛnyi no “kyɛn nkyɛ mbrɛ ɔtse dadaw no fitsi ber a Asɔr no hyɛɛ n’akwantu ase a ɔdze rifi sar do no.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Mumu 27 na 28, 1832, na Sanda 3, 1833. Nkɔnhyɛnyi no kyerɛ dɛ, ɔyɛ dɛ “‘olive ahataw’ … a wɔatsew efi Paradise Dua no do, Ewuradze n’asomdwee nsɛm a ɔdze ma hɛn no.” Wɔdze nyikyerɛ yi mae, ekyir no a asɔfompanyimfo a wɔwɔ ehyiadzi ase bɔɔ mpaa “ankorankor na wobuei hɔn ano bɔɔe, dɛ Ewuradze nda Ne pɛ a ɔfa Zion ne nkyekyeree ho edzi nkyerɛ hɛn no.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Kirtland, Ohio, Kwakwar 27, 1833. Towa a nna tsetseberdo enuanom no nom wɔ nhyiamu ase no maa Nkɔnhyɛnyi no dwendween asɛm no ho; iyi gyaa no ma obisaa Ewuradze wɔ ho. Nyikyerɛ a wɔfrɛ no Enyansasɛm yi, nye no nsunsuando.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 8, 1833. Nyikyerɛ yi yɛ kwan a wɔfaa do kyekyeer President a Odzi Kan no na n’Apamfo no nsɔwdo (hwɛ dza wɔakyerɛw wɔ Ɔfã 81 n’etsifi no); na ɔno na ɔmaa wɔhyɛɛ apamfo no a wɔabobɔ hɔn edzin no asɔfo wɔ Ebɔw 18, 1833.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 9, 1833. Aber yi nna Nkɔnhyɛnyi no gu do rekyerɛ Ahyɛmu Dadaw no ase. Ber a odur tsetseberdo kyerɛwsɛm no a wɔfrɛ no Esumadze (Apocrypha) no do no, obisaa Ewuradze na onyaa dɛm yikyerɛ yi.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith no, wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔw 15, 1833. Nyikyerɛ yi kyerɛ Frederick G. Williams, nyia ɔnnkyɛree biara woyii no dɛ ɔnyɛ ɔpamfo mma Joseph Smith no, wɔ no ndwuma wɔ Nkabɔmu Dwumadze mu no ho (hwɛ afã 78 na 82 etsifi nsɛm no).
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Esusow Aketseaba 6, 1833.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Dzifuu 2, 1833. Woyii Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, na Jared Carter dɛ wɔnyɛ Asɔrdan ne nsii ho apamfo kuw.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Kirtland, Ohio, Obiradzi 1, 1833. Dɛm nyikyerɛ yi yɛ akwankyerɛ a ofi Nyame hɔ a wɔbɛfa do esi dan a wɔbɔsom na wɔayɛ nkyerɛkyerɛ wɔ mu no no nsɔwdo, Ewuradze ne fi no (hwɛ Ɔfã 88:119–136).
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no a, ɔkyerɛ nhyehyɛɛ a ɔwɔ kuropɔn no anaa Zion stake a ɔwɔ Kirtland, Ohio ho, Obiradzi 4, 1833 dɛ ɔyɛ mfatoho ma Ahotseweefo no a wɔwɔ Kirtland. Dɛm aber no yɛ asɔfompanyin hɔn ehyiadzi, na asɛntsitsir a nna wɔrodwendwen ho nye nsaase bi a, wɔfrɛ no French kwã a, ɔyɛ Asɔr nedze a ɔbɛn Kirtland, nna wɔpɛ dɛ wɔdze ma binom. Ɔnam dɛ nna ehyiadzi no ase no, wonnhu nyia wɔmfa dɛm kwã no nhyɛ ne nsa ntsi, hɔn nyina yɛɛ adwen kor dɛ wobebisa Ewuradze wɔ dɛm asɛm no ho.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Dzifuu 2, 1833. Nyikyerɛ yi fa Ahotseweefo a wɔwɔ Zion, Jackson Mansin, Missouri no ho. Nkɔnhyɛnyi no n’ebisadze a obisa Ewuradze a ɔfa nsɛm bi ho, na no ho mbuae nye yi. Dɛm aber no, nna wɔretseetsee Asɔrmba a wɔwɔ Missouri no dodow, na Ayɛwoho 23, 1833 mu no, nna wɔahyɛ hɔn ma wɔdze hɔn nsa ahyɛ krataa a ɔkyerɛ dɛ wɔgye to mu dɛ wobefi Jackson Mansin hɔ akɔ ase.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Dzifuu 6, 1833. Osian atseetsee a nna wɔdze retseetsee Ahotseweefo a wɔwɔ Missouri no ntsi na wɔdze nyikyerɛ yi mae. Asɔrmba dodow a wɔbɔsoɛe wɔ Missouri no haaw tsimanmufo mu binom a Ahotseweefo no hɔn dodow na amanyɛsɛm, hɔn ahodze ho tum nye amandze na nyamesom ho nsonsonee no tseetsee hɔn. Ayɛwoho 1833 mu no etuatsewfo bi bɛsɛɛ Asɔr egyapadze, dze tar na ntɛkyerɛ yeyɛɛ Asɔrmba beenu ho na wɔkãa dɛ Ahotseweefo no ntu mfi Jackson County Ɔwɔ mu dɛ Nkɔnhyɛnyi no tsee dza nna ɔrokɔ do wɔ Missouri no wɔ Kirtland (kwansin ahaakron na otwa ntamu) dze, naaso nna mbrɛ gyinabew no mu esi ayɛ dzen no, gyedɛ yikyerɛ nko na ɔada no edzi akyerɛ no wɔ dɛm da no mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa John Murdock, Dzifuu 29, 1832, wɔ Hiram, Ohio. Nna John Murdock akã nsɛmpa no afe kor na no mboree ber a ne mba—woegya hɔn egyanka wɔ ne yer, Julia Clapp, no wu ekyir wɔ Ebɔbira 1831 no—nye ebusua ebusua binom tse wɔ Ohio.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Sidney Rigdon, wɔ Perrysburg, New York, Ɔbɛsɛ 12, 1833. Ɔnam dɛ nna enuanom beenu yi efi hɔn ebusuafo nkyɛn nda pii ntsi, hɔn enyi ebesi hɔn do.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no wɔ Kirtland, Ohio, Mumu 16 nye 17, 1833. Aber no nna wɔretseetsee Ahotseweefo a wɔaboa hɔn ano wɔ Missouri no. Etuatsewfo bi abɛpam hɔn efi hɔn efiefi mu wɔ Jackson Mansin; na Ahotseweefo no hɔn mu binom aper abɔ asese wɔ Van Buren, Lafayette na Ray Mansin na wɔkɔr do hun amandze. Dɛm aber no, nna Ahotseweefo no hɔn dodowara wɔ Clay Mansin, wɔ Missouri. Wosuaa dɛ wobokuku Asɔr no mu mba dodowara. Ahotseweefo a wɔwɔ Jackson County no hɔn adan mu ndzɛmba, hɔn ntar, anyɛmbowa yeyewee nye hɔn ahodze bi so; na wɔsɛɛ hɔn ekuadze pii so.
Asɔr no mu abaguafo etsitsir a odzi kan a wɔtsewee wɔ Kirtland, Ohio, Kwakwar 17, 1834 no mu nsɛm a wɔkyerɛwee. Elderfo Oliver Cowdery na Orson Hyde na wɔkyerɛɛw nsɛm kan dze no. Nkɔnhyɛnyi bobɔɔ nsɛm a wɔkyerɛwee no do adzekyee no, na da a odzi do no abaguafo etsitsir no hɔn nyinara gyee nsɛm no a wɔakyerɔw no too mu dɛ “abaguafo etsitsir nhyehyɛesɛm na amambusɛm” ma Asɔr no. Nkyekyɛmu 30 dze kesi 32 no a ɔfa Asomafo Abaguafo Duebien no ho no, wɔdze kãa ho wɔ 1835 mu wɔ Joseph Smith no kwankyerɛ ase ber a wɔyɛɛ dɛm fã yi krado ma wɔdze akã Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi no ho etsintsim epue guado no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Kirtland, Ohio, Kwakwar 24, 1834. Nyikyerɛ yi bae wɔ ber a Parley P. Pratt na Lyman Wight fii Missouri dur Kirtland, Ohio, dɛ wɔnye Nkɔnhyɛnyi no rebɛfa apam, ehu mbrɛ wobesi ama Ahotseweefo no hɔn nsaase a wɔwɔ Jackson Mansin no ma woeenya ahotɔ na wɔasan nye hɔn aba hɔn nsaase do.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ Kirtland, Ohio anaa bea a ɔbɛn, wɔ Ebɔbira 23, 1834 a ɔfa Nkabɔmu Edwumadze (hwɛ afã 78 na 82 etsifi nsɛm). Dɛm aber no bɛyɛ Nkabɔmu Edwumadze mu abaguafo nhyiamu a wɔdwendween kwan a wɔbɛfa do aboa nkorɔfo a wohia asetsena mu mboa kɛse no ho. Edwumadze nhyiamu a wodzi kan yɛɛ no Ebɔbira 10 no wɔpeen do dɛ wongu kuw no. Nyikyerɛ yi kyerɛ dɛ mbom wɔnsan nhyehyɛ edwumadze no bio; wɔnkyɛ n’egyapadze mma kuwmba no dɛ wɔyɛ edwumayɛfo. Joseph Smith no kwankyerɛ ase no, ekyir no wɔsesãa kasasin “Nkabɔmu Edwumadze” yɛɛ no “Nkabɔmu Nhyehyɛɛ” wɔ nyikyerɛ no mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Fishing Esutsen, Missouri, Obiradzi 22, 1834. Nkɔnhyɛnyi no kwankyerɛ ase no, Ahotseweefo a wofi Ohio nye apaamu binom so no bɔɔ nsera kɔr Missouri dɛ asafo kuw a ekyir no wɔbɛfrɛɛ no Zion Asese. Hɔn botae no nye dɛ wɔbɔbɔ Ahotseweefo no a woetu hɔn efi Missouri no ho ban ma wɔasan akɔ hɔn nsaase a ɔwɔ Jackson County no. Missourifo no a nna ahyɛse no wɔatseetsee Ahotseweefo no suroi dɛ Zion Asese no reba awerdzi na dɛm ntsi wotuii hyɛɛ Ahotseweefo binom a wɔtse Clay County, Missouri do dze gyee hɔn ho. Ambrado a ɔwɔ Missouri osiankaa n’anohoba dɛ ɔbɔboa Ahotseweefo no na Joseph Smith nyaa nyikyerɛ yi.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Kirtland, Ohio, Ɔberɛfɛw 25, 1834. Nyikyerɛ yi fa Warren A. Cowdery a, ɔyɛ Oliver Cowdery no nua panyin no ho.
Nyikyerɛ a ɔfa asɔfodzi ho a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae wɔ Kirtland, Ohio, bɛyɛ Ebɔbira 1835. Wɔkyerɛɛw ɔfã yi afe 1835 mu dze, naaso abakɔsɛm nkyerɛwee no da no edzi dɛ nkyekyɛmu 60 dze kesi 100 mu dodow kã nyikyerɛ bi a wɔnam Joseph Smith do mae no Ɔberɛfɛw 11, 1831. Ɔfã yi fa Duebien no hɔn Quorum ne nkyekyeree wɔ Kwakwar na Ebɔw 1835 ho. Bɛyɛ dɛ Nkɔnhyɛnyi no dze mae wɔ hɔn a wɔreyɛ ahoboa efir edzi Esusow Aketseaba 3, 1835, no hɔn enyim, ber a wɔrokɔ hɔn quorum dwuma a odzi kan no.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Kirtland, Ohio, Mumu 26, 1835. Lyman Sherman a nna wɔayɛ no eduosuon no mu baako no baa Nkɔnhyɛnyi no hɔ bɛsee no dɛ, ɔpɛ dɛ ohu dwuma a ɔsɛ dɛ odzi, na aber no na nsa kãa nyikyerɛ yi.
Mpaa a wɔbɔe dze tuu temple a ɔwɔ Kirtland, Ohio no dze hyɛɛ Nyame nsa, Ebɔw 27, 1836. Nsɛm a Nkɔnhyɛnyi no kyerɛwee no kyerɛ dɛ, wɔdze dɛm mpaabɔ yi maa no wɔ nyikyerɛ mu.
Enyido-adzehu a woyii kyerɛɛ Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no na Oliver Cowdery wɔ Asɔrfi no mu wɔ Kirtland, Ohio, Ebɔbira 3, 1836. Da no yɛ Ahomgyeda nhyiamu. Joseph Smith n’abakɔsɛm no kã dɛ: “Ewiaber no, moboaa presidentfo nkaa no ma yɛdze Ewuradze Edzidzi maa Asɔrmba no, a yɛgyee fii Duebien no a wɔwɔ kwan dɛ wodzi dwuma wɔ pon krɔnkrɔn no ho da no mu no. Muwiee dɛm dwuma no dzi maa nuanom no, mesanee kɔr asɛnkadaka no mu, na woesiaan ntwamutam no egu do, na emi na Oliver Cowdery buu ntwɛr na yɛbɔɔ mpaa awɔse na kommyɛ mu. Yewiee mpaa bɔ na yɛsoɛree no na woyii dɛm enyido-adzehu a ɔtoa do yi kyerɛɛ hɛn beenu nyina.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Salem, Massachusetts, Dzifuu 6, 1836. Dɛm aber no nna osian ɔsomdwuma a wɔreyɛ no ntsi nna Asɔr no mu banodzifo no, dze kaw kɛsenara. Wɔtsee dɛ wobenya sika kɛse bi efi Salem no, Nkɔnhyɛnyi no, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, na Oliver Cowdery tuu kwan fii Kirtland, Ohio, kɔr hɔ dɛ wɔrokɔhwehwɛ asɛm no mu na wɔakã asɛmpa no so. Enuanom no dzii dwuma pii wɔ Asɔr no mu na wɔkãa asɛmpa no so. Ber a ɔdaa edzi pefee dɛ sika biara nnyi hɔ ma hɔn no, wɔsaan hɔn ekyir baa Kirtland. Nsɛm pii a ho hia a opuee ekyir no, wɔkyerɛɛw ne nyina wɔ nyikyerɛ yi mu.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze maa Thomas B. Marsh, wɔ Kirtland, Ohio, Ayɛwoho 23, 1837, a ɔfa Eguambaa n’Asomafo Duebien no. Onyaa nyikyerɛ yi da no a Elderfo Heber C. Kimball na Orson Hyde dzii kan kãa Asɛmpa no wɔ Ngyiresiman mu no. Dɛm aber no, nna Thomas B. Marsh nye Asomafo Duebien no hɔn Quorum no hɔn President.
Nsɛmbisa bi a ɔwɔ Isaiah kyerɛwsɛm no mu a, Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no maa ho mbuae, wɔ anaa bea a ɔbɛn Far West, Missouri, Ebɔw, 1838.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Far West, Missouri, Ebɔbira 11, 1838.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Far West, Missouri, Ebɔbira 26, 1838, ɔkyerɛ Nyame ne pɛ a ɔfa mbrɛ wobesi ayɛ bea no do yie na woesi Ewuradze ne fi. Dɛm nyikyerɛ yi wɔdze maa dzibewdzi banodzifo na asɔrmba a wɔwɔ Asɔr no mu.
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no, wɔ bea bi a ɔbɛn Wight’s Ferry, wɔ bea a wɔfrɛ no Spring Hill, Daviess Mansin, Missouri, Esusow Aketseaba 19, 1838.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Far West, Missouri, Ayɛwoho 8, 1838 ɔfa ndwuma bi a ɔsɛ dɛ William Marks, Newel K. Whitney na Oliver Granger yɛ no ntsɛmara ho.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Far West, Missouri, Ayɛwoho 8, 1838, ɔyɛ mbuae a wonyae wɔ hɔn ebisadze, “Kyerɛ hɛn wo pɛ, O Ewuradze, dza ɔfa Duebien no ho no.”
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Far West, Missouri, Ayɛwoho 8, 1838 ɔyɛ mbuae a wonyae wɔ hɔn ebisadze: “O Ewuradze! Kyerɛ wo nkowaa ahodze dodow a Epɛ dɛ wɔdze tua hɔn ebupɛn du.” Wɔammfa ebupɛn du mbra dɛ mbrɛ yɛtse ase ndɛ da yi amma Asɔr no dada ansaana nyikyerɛ yi reba. Dɛm Kasafua ebupɛn du yi a ɔwɔ mpaabɔ a wɔaserɛ akã sesei nye dza ɔwɔ nyikyerɛ a nsa akã dada (64:23; 85:3; 97:11) no mu no nnkyerɛ nkyɛmu du no mu kor ara, na mbom ɔkyerɛ afɔrbɔdze nyinara a ofi akoma mu, anaadɛ tow a yetua dze to Asɔr no foto mu. Nna Ewuradze na ɔama Asɔr no mu mba etuhoakyɛ mbra dɛ na ahodze ho mbra dɛ wɔmfa mma (nkanka elderfo a wodzi bano no), wodzii ho ahyɛmu a nkyɛ ɔbɛtsena hɔ daapem. Na ɔnam dɛ hɔn mu dodowara enntum enndzi ahyɛmu no do ntsi, Ewuradze yii fii hɔ mber kakra na mbom ɔdze ebupɛn du mbra no hyɛɛ ananmu dze maa Asɔrtɔw no nyina. Nkɔnhyɛnyi no bisaa Ewuradze dɛ ɔnkyerɛ hɔn ahodze dodow a Ɔrohwehwɛ ma wɔdze edzi botae krɔnkrɔn no. Dɛm nyikyerɛ yi nye no ho mbuae.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Far West, Missouri, Ayɛwoho 8, 1838 ɔkyerɛ dza wɔmfa ebupɛn du no a wɔkãa ho asɛm wɔ nyikyerɛ a ɔwɔ Ɔfã 119 no nyɛ.
Mpaabɔ na nkɔnhyɛ a Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no kyerɛwee wɔ nwoma a ɔdze kɛmaa Asɔr no wɔ ber a ɔyɛ daduanyi wɔ Liberty efiadze, Missouri, Ebɔw 20, 1839. Wɔdze Nkɔnhyɛnyi no nye mfɛfo pii a wɔkã no ho egu efiadze abosoom pii. Hɔn ntotɔserɛ a wɔdze kɛmaa asɛndzifo no a wɔdaan hɔn no ennkesi hwee.
Ewuradze n’asɛm a ɔbaa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no hɔ wɔ ber a ɔyɛ daduanyi wɔ Liberty efiadze, Missouri. Ɔfã yi yɛ nwoma no mu bi a ɔdze kɛmaa Asɔr no wɔ Ebɔw 20, 1839 (hwɛ ɔfã 121 etsifi nsɛm).
Ahotseweefo no hɔn ndwuma a ɔfa hɔn a wɔtseetsee hɔn no ho, dɛ mbrɛ Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no kyerɛwee wɔ ber a ɔyɛ daduanyi wɔ Liberty efiadze, Missouri. Ɔfã yi yɛ nwoma a wɔdze maa Asɔr no no mu bi wɔ Ebɔw 20, 1839 (hwɛ ɔfã 121 etsifi nsɛm).
Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no wɔ Nauvoo, Illinois, Sanda 19, 1841. Osian ɔhaw na atseetsee a nna ɔreyɛ pii, na dza asɛndzifo no rekã tsia hɔn ntsi, ɔhyɛɛ Ahotseweefo no dɛ womfi Missouri hɔ nkɔ. Lilburn W. Boggs a ɔyɛ Missouri ambrado no nam krataa a wɔkyerɛɛw no Ɔbɛsɛ 27, 1838 kãa dɛ wontu hɔn anaa wonkum hɔn, dɛm ntsi, nna wonnkotum ayɛ ho hwee. Afe 1841 mu no a wɔdze dɛm nyikyerɛ yi mae no, nna Nauvoo kuropɔn no yɛ Eguadzibea wɔ Illinois, Ahotseweefo no na wɔkyekyeer kurow no, na ha na wɔyɛɛ no Asɔr no n’asoɛe.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Nauvoo, Illinois, Ebɔw, 1841, ɔfa Ahotseweefo a wɔwɔ Iowa apaamu ho.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Brigham Young ne fie wɔ Nauvoo, Illinois, Ayɛwoho 9, 1841. Dɛm aber yi, nna Brigham Young nye Asomafo Duebien Quorum no ne President.
Nwoma a Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no dze kɛmaa Nda a Odzi Ekyir Ahotseweefo a wɔwɔ Nauvoo, Illinois, ɔkyerɛɛ hɔn kwan a wɔmfa do nyɛ enuma mma ewufo, Nauvoo, Fankwa 1, 1842.
Nwoma a Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no kyerɛwee dze kɛmaa Jesus Christ N’Asɔr a ɔwɔ hɔ ma Nda a Odzi Ekyir Ahotseweefo no, ɔkyerɛɛ kwan bi so a wɔmfa do nyɛ enuma mma ewufo, Ɔkyerɛɛw no wɔ Nauvoo, Illinois, Fankwa 6, 1842.
Nkyerɛkyerɛ a Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no dze mae, wɔ Nauvoo, Illinois, Kwakwar 9, 1843 ɔkyerɛɛ nsaafee etsitsir ebiasa no a ɔma wotum hu nokwar su a ɔda abɔfo hɔn som na esunsum hɔn som ntamu.
Nkyerɛkyerɛ bi a Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no dze mae wɔ Ramus, Illinois, Ebɔbira 2, 1843.
Nkyerɛkyerɛ a Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no dze mae, wɔ Ramus, Illinois, Esusow Aketseaba 16 na 17, 1843.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Nauvoo, Illinois. Wɔkyerɛwee too hɔ Ayɛwoho 12, 1843 ɔfa ahyɛmudzi fofor a ɔwɔ hɔ daapem ho, awar ne mbersantsen ahyɛmudzi no kã ho nye awar pii ho nkyerɛkyerɛ. Ɔwɔ mu dɛ wɔkyerɛɛw dɛm nyikyerɛ yi wɔ 1843 dze, naaso abakɔsɛm nkyerɛwee da no edzi dɛ nkyerɛkyerɛ binom a ɔwɔ nyikyerɛ yi mu no, nna Nkɔnhyɛnyi no nyim no ahyɛse noara ofitsi afe 1831. Hwɛ Asɔr Dawurbɔ 1.
Nyikyerɛ a wɔnam Joseph Smith Nkɔnhyɛnyi no do dze mae, wɔ Hiram, Ohio, Ɔberɛfɛw 3, 1831. Dza Joseph Smith n’abakɔsɛm kã dze yɛ nyikyerɛ yi ne nyienyim nye dɛ: “Dɛm aber no nna ndzɛmba pii wɔ hɔ a, ɔfa Asɛmpa no a ɔsɛ dɛ wɔkã kyerɛ nyimpa a wɔtse asaase do, na dza ɔfa mbrɛ wobesi aboa hɔn ano a Elderfo no pɛ dɛ wohu, ama wɔaanantsew nokwar kan no mu na wɔakyerɛkyerɛ hɔn efi sor. Ɔberɛfɛw, 1831, na mibisaa Ewuradze na me nsa kãa nyikyerɛ a ho hia a odzi do yi.” Ahyɛse no, wɔdze dɛm fã yi kãa Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi no ho dɛ ɔyɛ Mbuaekyir, na ekyir no wɔmaa no Ɔfã nkanee.
Gyedzi ho dawurbɔ a, ɔfa aban nye mbra nyina ho, wɔtoow ho aba dze gyee too mu wɔ Asɔr ne nhyiamu ase wɔ Kirtland, Ohio, Dzifuu 17, 1835. Ahotseweefo no dodowara boaa ano dɛ wɔrobɔdwendwen Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi nwoma no mu nsɛm a ɔwɔ dza wotsintsiim no ahyɛse no ho. Dɛm aber no wɔdze dɛm dawurbɔ yi yɛɛ nyienyim: “Ama wɔannkyerɛ gyedzi a yɛwɔ no wɔ asaase do aban nye mbra nyina mu, no ase wɔ kwan fofor bi do no, anaadɛ ama hɔn adwen mu annyɛ hɔn konsee wɔ ho no, yesusu ho dɛ yɛbɛkyerɛ hɛn adwen wɔ dɛm adze yi ho ansaana yɛdze hɛn asɛm yi a ɔwɔ nwoma yi mu aba ewiei.”
Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith nye no nuabanyin, Hyrum Smith Patriarch no, hɔn kum a wokuum hɔn wɔ hɔn gyedzi no ntsi wɔ Carthage, Illinois, ho nkaabɔ Obiradzi 27, 1844. Dɛm nsɛm yi wɔdze kãa afe 1844 Nkyerɛkyerɛ na Ahyɛmudzi nwoma n’ewiei a, nna ɔka kakra ara ma wɔayɛ no krado eketintsim na wɔdze kuum Joseph nye Hyrum Smith no.
Ewuradze n’asɛm na ne pɛ a wɔnam President Brigham Young do dze mae, wɔ Winter Quarters, a ɔyɛ Israel asese mu, Omaha Ɔman, Missouri Esutsen n’anee egya, ɔbɛn Council Bluffs, Iowa.
Enyido-adzehu a wɔdze maa Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith, wɔ temple no mu wɔ Kirtland, Ohio, Sanda 21, 1836. Dɛm aber no, nna wɔreyɛ ayɛdze dɛ ahosiesie a wɔdze botu temple no ahyɛ Nyame nsa.
Enyido-adzehu a wɔdze maa President Joseph F. Smith wɔ Salt Lake City, Utah, Ɔbɛsɛ 3, 1918. Ne nsɛm a ɔkãe dze buee Asɔr ne Wiadze Mfɛndzanan Ehyiadzi a wɔyɛ no mprɛnu wɔ afe mu no dza ɔto do 89 ano, wɔ Ɔbɛsɛ 4, 1918 mu no, President Smith daa no edzi dɛ oenya nkitahodzi krɔnkrɔn pii wɔ abosoom a wɔabɛsen kɔ no mu. No mu kor fa Agyenkwa Ne sera a ɔkɛseraa ewufo hɔn esunsum no wɔ ber a, nna Ne nyimpadua da nda mu no, President Smith nyaa iyi da a adze rebɛkye ma wɔayɛ nhyiamu no. Wowiee ehyiadzi no ara nna ɔkyerɛwee. Ɔbɛsɛ 31, 1918 mu no, wɔdze kɛmaa President a Odzi Kan n’Apamfo no, Abaguafo Duebien no, na Patriarch no, na hɔn nyina dze adwenkor gyee too mu.
Bible na Mormon Nwoma no kyerɛkyerɛ dɛ awarfo beenu nko ntamu awar nye Nyame ne gyinapɛn ma awar gyedɛ Ɔnoara kyerɛ adze fofor.(Hwɛ 2 Samuel 12:7–8 na Jacob 2:27, 30). Nyikyerɛ a wɔdze maa Joseph Smith ekyir do no, Ɔhyehyɛɛ awar pii ne nyɛe wɔ Asɔrmba abɔasefo mu afe 1840 ahyɛse no mu (hwɛ ɔfã 132). Fitsi afe 1860 ber kesi 1880 ber mu no, United States aban hyɛɛ mbra a ɔmaa nyamesom nyɛe yi betsĩaa mbra. Ewiei no U.S. Asɛndzibea a Ɔkrɔn no gyee mbra yinom too mu. Onyaa nyikyerɛ ekyir no, President Wilford Woodruff dze Mpaamukã a odzi do yi too gua, a Asɔr no gyee too mu dɛ tum wɔ mu na ɔkyekyer hɔn wɔ Ɔbɛsɛ 6, 1890. Iyi ma wogyaa awar pii ne nyɛe wɔ Asɔr no mu.
Mormon Nwoma no kyerɛkyerɛ dɛ “hɔn nyinara yɛ adze kor ma Nyame,” a “bibinyi na borɔnyi, akowa na fahodzinyi, ɔbarimba na ɔbaa” kã ho (2 Nephi 26:33). Asɔr n’abakɔsɛm mu nyina no, woenuma nkorɔfo a wɔwɔ ebusuakuw na nyimpakuw a wofi aman pii mu na wɔabɛyɛ asɔrmba anokwafo. Joseph Smith n’aber do no wɔdze asɔfodzi no maa ebibifo mbanyin kumabaa binom. Asɔpɔkan abakɔsɛm mu no, Asɔr banodzifo gyaa dɛ wɔdze asɔfodzi no rema mbanyin a wɔyɛ Ebibifo asefo. Asɔr nkyerɛwee nnkyerɛ biribiara pɔkyee a ɔfa nyɛe yi ahyɛase. Nna Asɔr banodzifo no wɔ gyedzi dɛ wohia nyikyerɛ fi Nyame hɔ dze asesã nyɛe yi na mpaabɔ mu ara wɔhwehwɛɛ akwankyerɛ. Nyikyerɛ no baa Asɔr no ne President Spencer W. Kimball do na Asɔr banodzifo nkaa no sii no pi wɔ Obiradzi 1, 1978. Nyikyerɛ no yii dza osiw asɔfodzi ho kwan nyinara a nkyɛ ɔfa ebusuakuw ho no.